साह्रै समस्या भयो हजुरको शहरमा ! – Vision Khabar
साह्रै समस्या भयो हजुरको शहरमा !
। ५ भाद्र २०७५, मंगलवार १७:२२ मा प्रकाशित
यात्रु चोर्ने ! झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्छ । तैपनि, वास्तविकता यही हो । कलंकीको बाटो भएर, एक दिनमा हजाराै गाडी गुड्छन् । ड्राइभर, खलाँसी सडकमै गाडी रोकेर, यात्रु खोज्दै कुदिरहेका हुन्छन् ।
हजारौ मानिसले धुलोको समस्या भोगिरहेका छन् । सडकको बिजोग छ । गाडी चढ्दा धुलोको समस्या, पैदलयात्रा गर्दा अझ धेरै । सडक अव्यवस्थित भएका कारण पनि नागरिक रोग थपिरहेका छन् ।
यहाँको धुलोका कारण सयौ संख्यामा बिरामी पर्ने गरेका छन् । राजधानीकै मुख्य मार्गको छिटो निकास नदिने विगतदेखिका सरकारबाट जनताले अन्य चिप्ला कुरा पत्याउने कुरै भएन ।